Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 11/12/2019)
Kana uine mavhiki maviri kupedza kuSpain, imwe yenzira kuti kumativi ari kuongorora Spain nechitima. Kwete chete ichi kuchaita kuti uone mamwe incredible zvinotyisa kumativi nyika, asi chitima kufamba muSpain ndiye vakarongeka chaizvo uye nyore. Chakaomesesa chikamu titenge chitima matikiti. Nzira yakanakisisa kutenga yako chitima matikiti to travel to Spain by Train is online. Pane zvinhu zvinoverengeka Websites inokubvumirai kuita izvi. Chinokosha kuwana mumwe unonyatsoshanda iwe maererano nyore, mutauro, uye bhajeti. Kutenga matikiti dzako mangwanani unokubvumira kutora nani pangava inokosha prices uyewo rekuona iwe vanopinda zvitima uchida vasati vava zvakazara wakawandirwa.
Ronga bhuku matikiti dzenyu pachine kunotora zvakanakisisa yenyu chitima kufamba. Tora Kutarira ichi -Vhiki mbiri avaiita nokuti vaifamba kumativi Spain nechitima. Uyu dzinomutungamirira nokuda kwenyu rwendo inotevera.
Ndiwo musoro Spanish uye kongiri zvose akwegura uye zvitsva zvakanaka, ne naka mumapaki, incredible kunotenga, vibey Nightlife uye nzvimbo weboka Malasana. Madrid zvakare kumusha vanoverengeka Spain raMwari pamusoro mamiziyamu. Vazhinji imba pose kuzivikanwa mabasa. Nekuti pane zvakawanda zvokuita muguta rino saka renyu 3 Mazuva pano vachava rwafambwa. Zviri kutanga zvakanaka rwendo rwako-vhiki mbiri uye nyore kuwana chitima kuti pose kubva pano. Madrid ane mumwe akanaka kwazvo chitima nenhepfenyuro muSpain.
guta rino ndiyo kumba dzichipesana Kumhanya Kwemabhuru zvinotora nzvimbo muna July gore negore, asi pane zvakawanda kuna Pamplona pane ichi. Iri raiva pamusoro pegomo iri muNavarre mudunhu zvinoreva kune incredible maonero ari makomo nemipata pazasi. The mutaundi duku riri zvinoita nyore kufamba famba uye tora yakaisvonaka mapurani uye nhoroondo. Pane noutano bhaa uye tapas pachiitiko rose gore. Regai kutadza kufamba kuburikidza Old Town kana retracing nzira yakatorwa panguva Kumhanya Kwemabhuru. pakupedzisira, guta rino riri nyore nyore kubva San Sebastian uye pfupi chitima tasva kure.
Iri gungwa-guta rine kuva kumwe inozivikanwa uye dzakakurumbira maguta Spain, uye hainyadzisi! Ungave uchitsvaga unyanzvi uye tsika nemagariro, akitekicha, simbe mazuva pamusoro Beach, mapato-usiku hwose kana chete kusora guta idzva, pane chinhu munhu wose muBarcelona. Regai kurasikirwa Sagrada mhuri, inova imwe zvivako zvikuru kupfuura yazvino zvenyika. Spain nokuda Train inopa kakawanda nezvitima kubva Pamplona kuna Barcelona uye pane chete -Awa mana rwendo pakati maguta maviri.
Kusanganisa munhu Mediterranean vanonzwa vane tsika ano unyanzvi uye kubudirira zvinogoneka paaifamba Spain nechitima, Malaga anogona kuwanika Spain wokumaodzanyemba Costa Del Sol. The peguta rave achangobva yakadzorerwa uye anobatanidza munhu Gothic Church uye yakamanikana Ages chime mumigwagwa ano nembariro uye hudyu restaurants. Malaga ine mahombekombe incredible zvechokwadi kushanyira uye yevedza makomo rakapoteredzwa. Regai kurasikirwa kukwira kuna Gibralfaro kasitoro nokuti mweya-vachitora pfungwa zvikuru Andulasian kwezuva uye guta. Pane nezvitima achimhanya zuva kubva Valencia kuna Malaga.
Thiruvananthapuram kunongova pfupi chitima kukwira kubva Malaga uye sezvakanga yevedza. Ngatidzokerei weRoma umambo kuti nzwisisei kuti utarisike uye unzwe kuguta rino rinobatanidza zvinhu vakawanda zvenhoroondo nguva. Pane zvakawanda zvokuita muguta, kubva kusora muguta vachidzungaira achitevedza Arenal kota erwizi kuti kushanyira iri nakisisa Restaurants kana uchiona munhu kurwa nemombe muguta racho nhoroondo mhete. Musapotse kushanyira Thiruvananthapuram kuti Cathedral uye Alcázar, iyo yakashandiswa firimu mifananidzo kubva raparadza paTV Game of Zvigaro zvoumambo. Zvitima vanomhanya daily kubva Malaga kuna Thiruvananthapuram apo yendege iri uye kubva Thiruvananthapuram kudzokera Madrid.
If you need other European Train Tickets, chete tinya pano uye kuenda padandemutande redu uye vanakidzwe vatasvi.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspain-by-train%2F- (Mupumburu pasi kuona Embed Code)